Ukunyamekela iinwele zakho ngexesha lamaqondo obushushu ashushu ehlobo | Amadoda aQinisekileyo
Ungazinyamekela njani iinwele zakho kweli hlobo?
Ihlobo, kubantu abaninzi, lelona xesha lilindelweyo enyakeni. Kodwa kunjalo elona xesha lilimaza kakhulu iinwele zakho ngamaqondo obushushu aphezulu.
Okulandelayo, sibona uthotho lweengcebiso eziya kukunceda gcina iinwele ezisempilweni, ngelixa wonwabela iholide yakho ekudala uyilindile.
1 Gwema ubushushu
2 Khusela iinwele zakho
3 Yithi HAYI kulungiso
4 Hlanganisa iinwele zakho
5 Myeke ahambe
6 Ukutya okusempilweni
Enye yezinto ezichaphazela kakhulu iinwele ehlotyeni ngamaqondo obushushu aphezulu, ke kufanelekile thintela ukuyinika ubushushu ngakumbi xa uyihlamba ngamanzi ashushu.
Sincoma ukuba ulandele ukujonga okungaqhelekanga kweli hlobo, ukuvumela iinwele zakho zome emoyeni okanye usebenzisa i-dryer, kwindlela yokubanda yomoya obandayo.
Khusela iinwele zakho
Ukuba ngesizathu esithile kufuneka usebenzise isibhakela okanye intsimbi ethe tyaba ukufezekisa ukujonga, faka iinwele zakho kuqala. imveliso yokukhusela ubushushu. Ngale ndlela uya kuthintela iinwele zakho ekuhluphekeni emva kokomiswa. Kwakhona ungalibali sebenzisa umkhuseli ngokuchasene nemitha ye-UV ukuba uya elwandle.
Yithi HAYI kulungiso
Ngexesha lasehlotyeni, sihlala sikhona sebenzisa ukulungiswa ngakumbi kunesiqhelo, kuba impepho nobushushu benza kube lula ngathi ukuba simoshe. Nangona kunjalo, ezi mveliso ziyingozi kakhulu kwizinwele zakho kwaye kufuneka unonophelo kufuneka uzithathe ukuziphepha.
Hlanganisa iinwele zakho
Ukwahlula umonakalo onokuba usenokubandezeleka ziinwele zakho, sebenzisa iibhafu zekhrimu okanye iimveliso zokuthambisa. Khumbula hlikihla iingcambu okwemizuzu embalwa, ukuze babe nesiphumo ngakumbi kwaye bomelele, ngaloo ndlela kuthintelwe ukuwa kwabo.
Kuphephe ukunxiba iminqwazi okanye ukubopha iinwele zakho, ngelixa limanzi. Nangona ezi ndlela zilinga kakhulu elunxwemeni okanye echibini, zibangela ukophuka kunye nokulahleka kweenwele.
Ngexesha leeholide, sihlala sishiya ukutya kwaye sitya ukutya okunesondlo kakhulu. Nangona kungabonakali ngathi, oku kunokubangela ukulahleka kweenwele kunye nokulahleka kokukhanya. Kufuneka ugcine ukutya okunesondlo ngexesha lasehlotyeni kwaye ungangeni ekusetyenzisweni gwenxa kwamafutha.
Imithombo yemifanekiso: Iposti yeBucmi / Mendoza
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Zokuthambisa » Ungazinyamekela njani iinwele zakho kweli hlobo?
Injani into yokuthambisa yamadoda etsala abantu basetyhini?
Ekwindla kuyeza kuhlelo olutsha lweReiss